Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Wayaanaha oo Sargaal Caan Ah Xabsiga Utaxaabay, Waakuma?
Ciidanka Wayaanaha oo Sargaal Caan Ah Xabsiga Utaxaabay, Waakuma?
Posted by Dulmane	/ June 1, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ciidanka wayaanuhu xabsiga utaxaabeen siyaasi caan ah oo katirsan xisbi siyaasadeedka lagu magacaabo Arina Tigrey.
Siyaasigan laxidhay oo lagu magacaabo Gabremikael Tesfaye ayaa lasheegayaa in uu kamid ahaa xubnaha ugu firfircoon xisbi siyaasadeerka Arina Tigrey, waxaana lasheegayaa in loogu mar marsooday afkaartiisa cad iyo eedaynta uu ladulfuulo taliska wayaanaha.
Xisbiga Arina Tigrey oo uu madax kayahay wasiirkii hore ee gaashaandhiga Itoobiya Siye Abraham wadanka Itoobiya looga yaqaanaa xisbi argagixisada taageera kadib markii lagu xidhiidhiyay in ay wada shaqayn dhaw leeyihiin Jabhada TPDM ee kadagaalanta Gobolka Tigree.
Saraakiisha kooxda TPLF ugu saraysa ayaa dhankooda lasheegayaa in ay wadaan dadaal dheer oo ay ugu jiraan sidii ay ukasban lahaayeen bulshada Tigrey kadib markay ogaadeen in ay meel banaan kataagan yihiin qoomiyadihii kale, hase yeeshee qoomiyada Tigreega ayaa uqaybsan dhowr qaybood oo kala aragti duwan.
Sidoo kale kooxda TPLF ayaa isticmaalaysa awoodooda siyaasadeed iyo mida dhaqaale ee ay haystaan si ay uhelaan shacab badan oo aragtidooda aamina, waxayna arintaasu noqotay mid lagu fashilmay.
Sikastabaha ahaatee ciidanka wayaanaha ayaa lasheegayaa in ay jidh dil aad ubadan ugaysteen sargaalkan katirsan xisbiga Arina Tigrey ee saaka gurigiisa ay kala baxeen waxaana arinkan cadho wayn kamuujiyay dadka shacabka ah ee taageersan xisbiga Arina.